Wararka - Xeerarka hawlgalka badbaadada ee qalabka dhaliyaha naaftada
1.Koronto-dhaliyaha ku shaqeeya matoorka naaftada, shaqada matoorku waa in loo fuliyaa si waafaqsan qodobada khuseeya matoorka gubashada gudaha.
2.Kahor intaadan bilaabin koronto-dhaliyaha, si taxadar leh u hubi in fiilada qayb kasta ay sax tahay, in qaybaha isku xira ay adag yihiin, in burushka uu yahay mid caadi ah, in cadaadisku uu buuxinayo shuruudaha, iyo in siligga dhulka la dhigay uu wanaagsan yahay.
3.Kahor intaadan bilaabin, dhig qiimaha iska caabinta rheostat-ka kicinta meesha ugu badan, ka saar furaha wax soo saarka, koronto-dhaliyaha leh xajinta waa inuu ka gooyaa xajinta.Ku bilow mishiinka naaftada adigoon wax rar ah qabin oo si habsami leh u socodsii ka hor inta aanad bilaabin koronto dhaliyaha.
4.Marka uu koronto-dhaliyuhu bilaabo inuu socdo, fiiro gaar ah uyeel haddii uu jiro sanqadh makaanik ah, gariir aan caadi ahayn, iwm. Marka xaaladdu caadi tahay, ku hagaaji koronto-dhaliyaha xawaaraha lagu qiimeeyay, ku hagaaji koronta ilaa qiimaha la qiimeeyay, ka dibna xidh beddelka wax-soo-saarka una beddel koronto dibadda ah.Culayska waa in si tartiib tartiib ah loo kordhiyo si loogu dadaalo dheelitirka saddexda weji.
5.Dhammaan dab-dhaliyeyaashii u diyaarsanaa hawlgal barbar socda waa inay galeen hawl caadi ah oo deggan.
6.Ka dib markii la helo calaamadda "udiyaar u ah isku xirka isbarbardhigga", hagaaji xawaaraha injiinka naaftada iyadoo ku saleysan aaladda oo dhan, oo shid waqtiga isku-dhafka.
7.Inta lagu jiro hawlgalka koronto-dhaliyaha, fiiro gaar ah u yeelo dhawaaqa matoorka oo u fiirso in calaamadaha aaladaha kala duwan ay ku jiraan heerka caadiga ah.Hubi in qaybta qalliinku ay tahay mid caadi ah iyo in kor u kaca heerkulka matoorku uu aad u sarreeyo.Oo samee diiwaannada hawlgalka.
8.Inta lagu jiro xiritaanka, marka hore yareyso culeyska, soo celi reostatka kicinta si aad u yareyso tamarta, ka dibna jar furaha si isku xigta, ugu dambeyntiina jooji mashiinka naaftada.
9.Koronto-dhaliyaha mobaylada, baloodhka hoostiisa waa in lagu dhigaa asaas deggan ka hor inta aan la isticmaalin, lamana oggola inuu dhaqaaqo inta lagu jiro hawlgalka.
10.Marka uu koronto-dhaliyuhu socdo, xitaa haddii uusan ku faraxsanayn, waxa loo qaadanayaa in uu danab leeyahay.Waa mamnuuc in lagu shaqeeyo laynka baxaya ee koronto-dhaliyaha wareega, taabo rotor-ka ama gacanta lagu nadiifiyo.Koronto dhaliyaha shaqaynaya waa inaan lagu daboolin shiraac.
11.Ka dib koronto-dhaliyaha, si taxadar leh u hubi inay jiraan qalab, qalab iyo noocyo kale oo u dhexeeya rotor-ka iyo booska stator si aad uga fogaato waxyeellada koronto-dhaliyaha inta lagu jiro hawlgalka.
12.Dhammaan qalabka korantada ee qolka mishiinka waa in si la isku halleyn karo loo dejiyo.
13.Waa mamnuuc in qolka mishiinka lagu ururiyo waxyaabo kala duwan, waxyaabaha guban kara iyo walxaha qarxa.Marka laga reebo shaqaalaha shaqada ku jira, shaqaale kale looma ogola inay galaan fasax la'aan.
14.Qolka waa in lagu qalabeeyaa qalabka dab-damiska ee lagama maarmaanka ah.Haddii shil dab dhaco, gudbinta korontadu waa in isla markiiba la joojiyaa, koronto-dhaliye waa in la damiyaa, dabkana waa in lagu damiyaa kaarboon laba ogsaydh ama dab-demiska kaarboon tetrachloride.
Waqtiga post: Seb-09-2021